၎ကြိမ်မြောက် ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ -(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ၄ကြိမ်မြောက် ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ -(၁)	27
၄ကြိမ်မြောက် ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ -(၁)
Posted by Novy on Jan 12, 2015 in Photography, Travel | 27 comments
၄ကြိမ်မြောက် ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ
တာမွေလူမိုက်ဆီမှ ဆက်ကြေးခွဲနေတဲ့ ရွာမမတွေ (ဂျူနီယာဂီကတော့ အိပ်ချင်ပြီတဲ့)
သကြားကတော့ နက်ပြည်ကို ဖုံးခေါ်နေရဲ့
အဝေးကနေလာတဲ့ ရွာသား၂ယောက်ကို ဒေါက်ဒါက်က ဧည့်ခံနေတယ်လေ
sandwich အလှူ ရှင်
အပိုင်း၂နဲ့ ၃ လာအုံးမယ်နော်
kyeemite says: .Good photos, ပုံလေးတွေ ကြည်နေတာပဲ..ကျေးဇူးပါ မနိုဗွီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: တက်လာပကွ
သေချာတယ် ပုံအတော်များများမှာ ဖုန်းပွတ်နေရင် ဘယ်သူလဲမမေးနဲ့ မောင်မာဃပဲ
kyeemite says: .ဒီတခါပုံတွေ လူကျဲနေသလိုဖြစ်ရတာက အခန်းထဲဆေးလိပ်မသောက်ရဆိုတော့
.ဂလု ဖိုတိုရိုက်တော့မှ အတော်စုယူရတယ်…အချို့လည်းပြန်ကုန်ဘီ
.ဘာပြောပြော ကျုပ်ကျေနပ်ပါသဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: နောက်ဆုံတွေ့ပွဲတွေမှာ ဂရုဖိုတိုကို လူစုံစဉ်အရင်ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ အဲလိုဆို လူစုံတက်စုံပိုပါမယ်ထင်တယ်။
kai says: ကျောင်းသားတုံးကလို.. ဓာတ်ပုံ မြားပြပြီး.. တုတ်လိုက်ရရင်တော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
aye.kk says: နိုဗီရေ
Novy says: ပုံတွေကောင်းတယ်ပြောလို့ကျေးဇူးပါရှင်
kyeemite says: . မှန်တံခါးကို အပေါက်ထင်ပီး ၀င်တိုးတဲ့သူကလည်းချိသေး…“၀ုန်း” ကနဲနေတာပဲ
.ဘယ်တျောက်လည်းတော့မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
အလင်းဆက် says: ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ လူပြိုကြီးလေ..
Wow says: ပုံဒွေက အကုန်လှ
ဂလုပုံတွေမှာ လူများပါတယ်.. လူတွေက ခန်းမထဲဖြန့်ထိုင်နေလို့ နဲတယ်ထင်ရတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 437
ဦးသု says: ကလေးနဲ့ မိန်းမပါလို့
Crystalline says: ပျော်စရာကြီး… ရွာထဲကမမတွေ တော်တော်ချောတာပဲ…
အဟိ… ကိုယ်ဝန်သည်ကတော့ ဘယ်ညာပါတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ရွာ့အချောအလှ ကွမ်းတောင်ကိုင် လုံမ များ ဆိုတာ ကတော့ ပုဂံပြား နဲ့ ဖုံး မရတဲ့ အမှန်တရား ဖြစ်နေပါပေါ့။
အားလုံး တစ်မျိုးစီ ချစ်ဖို့ကောင်း ကြတယ်။
ဂျူနို လေးလဲ အတော်ထွားလာတာ။ ပိုပြီး ချောလာတယ် လို့ ပြောလိုက်ပါ မနို ရေ။
မောင်ဂီ ရဲ့ သား ကျန်ကျောင်း လေး ကလဲ ချစ်ဖို့ကောင်းလေးပါ။ အဖေတူ ဂျစ်ကန်ကန် တော့ ဟုတ်မယ်မထင်။
ဇီဇီ နဲ့ ကျောက်စ် ကို ဘေးက ရပ်ပြီး မိုက်ကြည့်ကြည့် နေပါရော့လား။ (မောင်မတ် ထင်ရဲ့)
ကျောက်စ် ကလဲ မယ်နှင်း နဲ့ အပြိုင် ဖွံ့ နေပါရောလား။
လုံမ တွေထဲ ကောင်းကင် ကို သိပြီ။ တုံတုံ ကို သိ။ ဇီ ကို သိ။
ညီမ တွေထဲ အစ်မဒုံ၊ မအိ၊ မသဲ၊မနို၊ဝေ ကို သိတယ်။
ကျန်သူတွေ ကို မိတ်ဆက်ပေးပါဦးလား။ ချစ်မမ မလာနိုင်ဘူးပေါ့။
padonmar says: ဂျင်းအကျီအပြာနဲ့ချောချောလေးက မမ၀ါး(သူက ၀ါးဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်ပိုကောင်းပါသတဲ့)အရင်တခါက ၀ါးဆိုတာ ဘယ်သူပါလိမ့်လို့ သိချင်နေတဲ့ ရွာသားတယောက်ရှိပါတယ်။ဘယ်သူပါလ်ိမ့်။
လူပိုကြီးပုံထဲမှာ လှနေတာ မအိ၊သဲနဲ့ နှင်းဆီစိမ်း။
သိကြားနတ်ပြည်ဖုန်းခေါ်နေတဲ့ထဲက တွတ်ထိုးနေတာ မှီနဲ့ သူ့ညီမလေး အမာညို(ရွာသူပါပဲ)။
ဒေါက်ဒေါက်ဧည့်ခံတာ မန်းကလာတဲ့ ကိုခင်ခ နဲ့ နေပူတော်က ဒေါက်တာရွာစားကျော်မင်းနန္ဒာ(ရှင်မွေးလွန်းကပခုံးမှာ ဘား၃ရစ်တင်ပေးထားလိုက်ပြီ)
flamingo says: ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာ……
padonmar says: ဟယ်တော့
flamingo says: ဓါတ်ပုံတွေတင်တယ်ဆိုကတည်းကစောင့်နေတာပါဗျာ….ကြွေးတွေများလွန်းလို့မလှူနိင်…ချောင်မှာပုန်းနေရပါကြောင်း…
Wow says: ကြွေးရှင်များလားမသိ… ဒါ့ပုံပြပီး ကြွေးလာတောင်းလို့ကတော့ အို.. သိဝူး သိဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: တကယ် ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ပဲ…
လူချင်းရင်းနှီးနေပြီး ခုမှ ပြန်မိတ်ဆက်ရတယ်….
ရွာကလူတွေ အများကြီးကို ခုပထမဆုံး မြင်ဖူးတာ….
နောက်နှစ်တွေလဲ အားလုံးလူစုံ ဆုံချင်ပါတယ်…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ရွာသူားတွေကတော့ဖြင့်
ကျားရော၊ မ ရော၊ စွံပြီးတာရော၊ စွံတာရော၊ မစွံသေးတာရော၊ မစွံတာရော …
အကုန်ချော၊ အကုန်လှ၊ အကုန် ခန့်ကြပါ့ဗျားးးး
အလင်းဆက် says: ဟေ့ယောင်… မစွံတာတွေတော့ ထည့်မပြောရင် ကောင်းမယ်…
ဟွင်းးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: ဒီလို တွေ့ဆုံပွဲမှာ အဖွဲ့ကျတဲ့ ကိုရင်စည်ကိုတောင် သတိရမိပါတယ်။ ဆရာ ထက်ဝေးတို့ ကမ်းကြီးတို့ကော မလာဘူးလား…
Wow says: မမကမ်းက အသီးနုတော့ မလာရဲဘူး… ကရင်စီကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိနေလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ခုမှပုံတွေတဝကြီးပြန်ကြည့်ရတယ် လွမ်းထှာအိုက်နေ့လေးကို
Novy says: ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ -(၂) ကိုဆက်လက်အားပေးပါရှင်
uncle gyi says: ပုံရိပ်၂ကိုဆက်လက်အားပေးနေပါကြောင်း
Swal Taw Ywet says: အကျနုပ် လိုတော့ လျို့ ၀ှက်ဇာတ်လမ်းလေး မရေးကြပါကလားးးးးး။
နောက်နှစ် Vacation Plan အရ အောက်တိုဘာထဲပြန်လာရမလားမှတ်ရ။